Hedgerow | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ireo toro-làlana ambony momba ny fikarakarana sy ny fambolena sodom-boaloboka
Iray amin'ireo zavamaniry malaza indrindra amin'ny fananganana fefy miafina ny tanimbolin'ny varimbazaha. Io hazo goavam-be io dia matetika ampiasaina amin'ny fomba fanorenana tontolo, ary misy antony maromaro amin'izany. Mivoatra haingana ny vary varahina, manana ravina mamirapiratra, marevaka ary tsy mahazatra ny lokony. Mety ho hita matetika any an-tanan-dehibe sy zaridaina izy io.
Famaranana chubushnik: mamboly sy mikarakara kiraro iray ao amin'ny zaridaina
Ny famonosana chubushnik dia zavamaniry mamy marevaka ao amin'ny fianakaviana Hortensia misy voninkazo mamy fotsy. Ny faharoa dia ny jasmine zaridaina. Matetika no hita any atsimon'i Eoropa Andrefana. Ny fototra dia tena mety tsara amin'ny fanoratana ny dacha, ary ny famaritana azy dia azafady na dia ilay mpamboly mahay aza.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hedgerow